Home Wararka Madaxweyne Deni oo weeraray hoggaanka MW Farmaajo
Madaxweyne Deni oo weeraray hoggaanka MW Farmaajo
Madaxweynaha maamulka Puntland, Mudane Siciid Cabdullaahi Maxamed (Deni) oo kulamo isaga iyo Madaxweynaha Jubbaland ay ka wadaan Boosaaso ayaa ka hadlay xaaladda maamulkaasi, gaar ahaan tan gobolka Bari.
Deni oo weerar dhanka afka ah ku qaaday dowladda federaalka ayaa ku eedeeyey inay dhibaato ka wado gobolkaasi, islamarkaana ay ku mashquulsan tahay arrimaha Puntland.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay jiraan shaqsiyaad ka tirsan dowladda dhexe oo ka shaqeynaya, sidii ay isaga hor keeni lahaayeen xukuumaddiisa iyo odayaasha dhaqanka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee dowlad goboleedka Puntland.
Shaqsiyaadkaas oo uusan carab baabin ayuu sheegay inay fariimo u soo diraan qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka, iyadoo ujeedadu tahay inay ka soo horjeestaan Puntland, si khal khal siyaasadeed looga abuuro deegaanada maamulkaasi.
Ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay guud ahaan dhaqanka Puntland inay kala shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida siyaasadeed ee maamulkaasi.
Puntland ayaa haatan wuxuu khilaaf xoogan ka dhexeeya dowladda federaalka, kaas oo muddo soo jiitamayey, wuxuuna saameeyey xiriirka iyo wada shaqeynta labada dhinac.